နှုတ်ခမ်းမွှေးဘယ်လိုထားကြမလဲ?? – The Myanmar Gentlemen Supplies
"ယောင်္ကျားလေးတွေ အတွက် နှုတ်ခမ်းမွှေးတွေ၊ မုတ်ဆိတ်တွေက မိန်းကလေးတွေရဲ့ မိတ်ကပ်အတိုင်းပဲတဲ့။ "
ဟုတ်တယ်ဗျ။ ပြောလဲပြောခြင်စရာပဲ။ ကျနော်တို့ရဲ့ အသွင်အပြင်ကို သူတို့အကူအညီနဲ့ မျိုးစုံပြောင်းလဲပစ်နိုင်တယ်လေ။ ရင့်ကျက်တဲ့ပုံ၊ ငယ်ရွယ်တဲ့ပုံ၊ မျက်နှာအချိုးအစားမျိုးစုံ၊ ထောင့်ကျကျမေးရိုး အစရှိတာအားလုံးအတွက် နှုတ်ခမ်းမွှေး၊ မုတ်ဆိတ်တွေကို သဏ္ဌာန်ဖော်ပြီး ကောင်းကောင်းကြီး လိုခြင်တဲ့ပုံစံသွားလို့ရတယ်ဗျ။ (အာ့ကြောင့် ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ ဘာညာအတုတွေတပ်ပြီး ရုပ်ဖျက်ကြတာပဲကြည့် :P)
ဒီတော့...နှုတ်ခမ်းမွှေး ထားချင်တဲ့ မိတ်ဆွေများရှိကြသလားဗျ??🤔🤔
ဒီ Blog Post မှာတော့ မိတ်ဆွေတို့အတွက် ခန့်ညားတဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေးကြီးတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ အကူအညီပေးနိုင်မဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးပေးသွားမှာပါ။
ကိုယ်က အာရှသားမို့၊ အရှေ့တိုင်းသားမို့ မုတ်ဆိတ်တွေ၊ နှုတ်ခမ်းမွှေးတွေ ပေါက်ဖို့ ခက်တယ်လို့ အများကပြောကြလို့ လက်မလျော့လိုက်နဲ့ဗျ။ ကျွန်တော်တို့ သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်တောင် ရှေးခေတ်မြန်မာယောကျာ်းကြီးများက နှုတ်ခမ်းမွှေးစစ နဲ့ ခန့်ချောကြီးတွေဗျ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ မျိုးရိုးဗီဇထဲမှာ ဒါတွေပါလာတယ်ဆိုတာ ငြင်းနေစရာကို မလိုတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။
အခု ကျွန်တော်တို့ ထားချင်တဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေး (Mustache) ဆိုတာက ဟပ်ချလောင်းဆိုပြီး တန်းရနိုင်တဲ့ အရာမဟုတ်ပဲ၊ အချိန်တွေ၊ စိတ်ရှည်မှူတွေနဲ့ ဖန်တီးယူထားတဲ့ Accessories တစ်ခုအနေနဲ့ ဂုဏ်ယူဝန့်ကြွားနိုင်တဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ခတ်တွေမှာတော့ အခြေအနေအကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပါးသိုင်းမွှေးတွေ၊ မုတ်ဆိတ်တွေ၊ နှုတ်ခမ်းမွှေးတွေထားရင် တစ်ချို့က မကြိုက်ကြတာတွေများတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းမှာ ခေတ်ပြောင်းပြီး ခေတ်စားလာတာကြောင့် တော်တော်များများက လက်ခံလာကြပြန်ရော။ ဒီတော့ ထားချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ကိုယ်မို့ ဆန္ဒရှိရင်တော့ ထားကြည့်ကြပါလို့ပဲ တိုက်တွန်းခြင်ပါတယ်။ ဒီမျက်နှာနဲ့ပဲ တစ်သက်လုံးနေသွားရမှာဆိုတော့ အပြောင်းအလဲလေးပေါ့နော်။ (ပြောလို့မရဘူးလေ ကိုယ်က Tony Stark ရုပ် ထွက်ရင်ထွက်သွားမှာပေါ့... ဟဲဟဲ :P)
Photo by montclareschool.org
"ထားကြည့်ပါသေးတယ်ကွာ ဒါပေမဲ့ ကျိုးတိုးကျဲတဲကြီးမို့ ရိတ်ပလိုက်ရတယ်"
ကတုံးတုံးပြီး ဆံပင်ပြန်ပေါက်တဲ့အခါ အစပိုင်း သည်းခံပြီး စောင့်ရသလိုပါပဲ။ နှုတ်ခမ်းမွှေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်ရှည်သည်းခံ လမ်းကြောင်းတော့မှန်ရမယ်ဗျ။ "Good Things Take Time" ဆိုတဲ့အတိုင်း ကောင်းမွန်တဲ့အရာတိုင်းက စောင့်ရတတ်ပါတယ်။ ရလာတဲ့အခါမှာလည်း စောင့်ရကျိုးနပ်ပါတယ်။
Photo by stepbystep.com
ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ အားလုံးအရှည်တစ်နေရာကို ညီညီညာညာ ရောက်လာဖို့ အရင်စောင့်ပေးရပါတယ်။ တကယ် နှုတ်ခမ်းမွှေး စထားပြီဆိုတာနဲ့ နှုတ်ခမ်းအထက်က အမွှေးလေးတွေက မညီမညာပေါက်တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ မလှမပမို့ ရိတ်ပစ်ချင်တဲ့ စိတ်ကိုလည်း အတော်ထိန်းပေးနိုင်ရပါမယ်။ ပထမ နှစ်ပတ်လောက်မှာ ပုံပန်းကျဦးမှာမဟုတ်တဲ့အတွက် သည်းခံနိုင်ဖို့ နဲ့ စိတ်ရှည်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဘေးအစွန်းနှစ်ဖက်က ရှည်လာပြီး အလယ်မှာ မတိုမရှည်ဖြစ်တာကို အစောပိုင်းမှာ ရှောင်ရှားဖို့အတွက် ညှပ်ခြင်း၊ တိခြင်း ကို ပြုလုပ်ပေးရပါတယ်။ ကတ်ကြေးအသေးတစ်လက်နဲ့ ကြည့်ကောင်းမဲ့အရှည်လောက်မှာညှပ်ပြီး ညီလာအောင်စောင့်ပေးဖို့ပါပဲ။
၂ ပတ်ကျော်တဲ့အခါမှာ အစွန်းပိုင်းက အရှည်တွေကိုသာပုံမှန်တိပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် အကုန်ညီညာတဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေး တစ်ခု စတင်ပုံပေါ်လာမှာပါ။ ဒီအဆင့်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ နောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံကို စတင်ပြီး ညှိယူလို့ရပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့် ပထမ နှစ်ပတ်မှာ တကယ်ကို စိတ်ရှည်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ညှိတဲ့အခါမှာလည်း ပုံမှန်အနေအထားအတိုင်း မဆွဲဆန့်၊ မဖိပဲ ညှပ်ပေးပါ။ နှုတ်ခမ်းမွှေးက မူလနေရာကိုပြန်သွားတတ်တာမို့ ဖိပြီးညှပ်မိလိုက်တဲ့အခါ ကိုယ်ညှပ်လိုက်တဲ့အရှည်ထက် ပိုတိုသွားတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါထဲ အရှည်ကြီးညှပ်ပစ်တာထက် နဲနဲခြင်းစီလိုသလောက်ပဲညှပ်ပေးပါ။ တစ်လနီးပါး ကြိုးစားထားတဲ့ ရလဒ် အလကားဖြစ်မသွားစေဖို့ပါ။
ပေါက်နှုန်းက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူတတ်တာမို့ ၂ပတ်ပြည့်လို့ ကောင်းကောင်းမထွက်လာရင်လည်း စိတ်မညစ်ပါနဲ့.. ။ တစ်ချို့က အနည်းငယ်ပိုကြာတတ်ပါတယ်။ အချို့ကတော့ ပေါက်နှုန်းမြန်ဖို့ Vitamin A, B, C, E အစရှိတာတို့ကို Supplement အနေနဲ့ ဖြည့်တင်းပေးကြပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ cells သေတွေ ပိတ်မနေအောင် မျက်နှာကို သန့်ရှင်းပေးသင့်ပါတယ်။
နှုတ်ခမ်းမွှေးစတိုင် တွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ သူ့ကျ ဒီလိုပုံဖြစ်တယ်၊ ကိုယ့်ကျမဖြစ်ဖူးဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပေါက်ပုံအနေအထား၊ ညှပ်ပုံညှပ်နည်း နဲ့ ထိန်းသိမ်းပုံ ထိန်းသိမ်းနည်းကွာလို့ဖြစ်တာပါ။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံစံကို ပြင်ယူလို့ရပါတယ်။ ပုံစံတွေ အများကြီးထဲက ထားလေ့ရှိတဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေးစတိုင်တွေကတော့
Style 1: Handlebar Mustache
နှုတ်ခမ်းမွှေးအဆုံးမှာ ပါးရိုးတွေဆီ ကွေးသွားတဲ့ ဒီဇိုင်းပါ။ ဒီပုံစံကတော့ ကျနော်တို့အာရှတိုက်သားတွေလို ပျော့ပြောင်းပြီးပုံသွင်းနိုင်တဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေးပိုင်ရှင်တွေ အကြိုက်များကြတဲ့ ပုံစံဖြစ်ပြီး၊ သပ်ရပ်တဲ့ဆံပင်ပုံစံနဲ့ကော ခေတ်ဆန်ဆန်ဆံပင်ပုံစံတွေနဲ့ပါ လိုက်ဖက်ပါတယ်။ ကပိုကရိုဆံပင်တွေနဲ့တော့ အမြင်သိပ်မလှနိုင်ပါဘူး။ ထားရတာလည်း မခက်ခဲပဲ၊ အချို့က အလယ်ပိုင်းကို တိပေးကြပြီး၊ အချို့ကတော့ အရှည်ကိုညီညီညာညာထားပေးပြီး ပုံသွင်းပေးတတ်ကြပါတယ်။
Handlebar ကို ပုံသွင်းဖို့က အရမ်းလွယ်ပြီး၊ တစ်လက်မပတ်ဝန်းကျင် အရှည်လောက်မှာစပြီး ပုံသွင်းနိုင်ပါတယ်။ Moustache Wax (နှုတ်ခမ်းမွှေးဆီ)ကို လက်ထဲနည်းနည်းယူပြီး လိုအပ်တဲ့နေရာတဝိုက်ကို သင့်တော်သလောက်လိမ်းပြီး အစွန်းလေးတွေကို ကျစ်လိုက်ရုံပါပဲ။
Style 2: Chevron Mustache
ထိန်းသိမ်းရလဲလွယ်ကူပြီး အရိုးရှင်းဆုံး စတိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းမွှေး ထူထူထဲထဲပေါက်နိုင်သူတွေအတွက်တော့ အရမ်းခန့်တဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ သူက ခပ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ ပုံဖော်ရခက်တဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေးမျိုးအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ အောက်ကိုစိုက်ပြီး တည့်တည့်ပေါက်တတ်တဲ့ ဆရာသမားတွေအတွက် နှုတ်ခမ်းမွှေးဘီးနဲ့ ဖြီးပေးပြီး၊ နှုတ်ခမ်းကိုကျော်လာတာနဲ့ ပုံမှန်ညှပ်ပေးရုံပါပဲ။
Style 3: Pencil Mustache
ဒီပုံစံကတော့ Iron Man ရုပ်ရှင်ထဲမှ Tony Stark (Robert John Downey Jr) ကြီး ရဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ နာမည်အရ ခဲတံချောင်းလေး အထူလောက်ပဲရှိပြီး အဖြောင့်အတိုင်းထားကြပါတယ်။ အပေါ်နားလေးကို ရိတ်ပေးပြီး၊ လွှတ်ထားကြလေ့ရှိပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းမွှေးသိပ်မထူတဲ့သူတွေအတွက် Chevron ထက်စာရင် ပိုထားရလွယ်တဲ့အမျိုးအစားပါ။ တစ်လလောက်နဲ့ ဒီပုံထားလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီပုံစံက ခဏခဏညှပ်ပေးပြီး အောက်ခြေကို သေချာဂရုစိုက်ပေးရပါတယ်။ အဖြောင့်ပုံစံမို့ သေချာဂရုမစိုက်ပေးနိုင်ရင် ပုံပျက်သွားတတ်ပါတယ်။ Clean look ကို လိုခြင်ကြတဲ့ မိတ်ဆွေတို့အတွက်ပါ။
Style 4: Scruffy Mustache
အရမ်း သိသာတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲ ပါးပါးလေးပဲထားပုံလေးပါ။ နှုတ်ခမ်းမွှေး စထားတဲ့သူတွေအတွက် အလွယ်ဆုံးနဲ့ အေးဆေးအဖြစ်ဆုံးများဖြစ်မလားပဲ။ မတိုမရှည်အနေအထားလေးကို ကြည့်ကောင်းအောင်ညှိပေးထားရုံပါပဲ။ Ryan Gosling, Zac Efron နဲ့ Johnny Depp တို့ရဲ့နာမည်ကြီးပုံစံတွေပေါ့ဗျာ။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ အစပျိုးဖို့အတွက် အတော်ပြည့်စုံပြီထင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ရဲ့ ဆံပင်၊ မုတ်ဆိတ် နဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေးတွေက မတူကြတော့၊ ထားရင်းနဲ့ပဲ ကိုယ်နဲ့အကိုက်အညီဆုံးဖြစ်မဲ့ ပုံစံ၊ ထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ လိုအပ်ပစ္စည်းတွေကို လေ့လာသွားကြရတာပါပဲ။
ထားဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်လဲ လူကြီးမင်းတို့အတွက်လိုအပ်မဲ့ အရည်အသွေးမြင့် Beard, Mustache & Body ဆိုင်ရာ Products အမျိုးမျိုးကိုလဲ The Myanmar Gentlemen Supplies တွင်စတင်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ရရှိနိုင်တဲ့ Product များကို အောက်ပါခလုတ်မှတဆင့်ဝင်ရောက် လေ့လာကြည့်ရှုရင်း ခန့်ညားတဲ့နှုတ်ခမ်းမွှေး ပိုင်ရှင်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ပါစေဗျာ။
🔥 Myanmar’s First & Finest Mens’ Grooming Webstore 🔥
ကမ္ဘာ့လူကြိုက်အများဆုံး အရည်အသွေးမြင့် အမျိုးသားခေါင်းလိမ်းဆီများ၊ Beard၊ Mustache၊ Body နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးသို့ အိမ်အရောက်နှင့် အခြားမြို့များအတွက် ကားဂိတ်သို့အရောက် လက်လီ၊ လက်ကား မှာယူရရှိနိုင်ပါပြီ။
Facebook Messenger: m.me/mmgents
Website www.mmgents.com တွင်မှာယူပါက ၁,၀၀၀ကျပ် Discount ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
➡️Discount Code: 1000web⬅️ ကို Checkout လုပ်ရာတွင်ရိုက်ထည့်ပေးပါရန်။
ရရှိနိုင်သည့် ပစ္စည်းများ၊ ဈေးနှုန်းနှင့် အချက်အလက်အပြည့်အစုံတို့ကိုကြည့်ရှုရန်...
👉 ခေါင်းလိမ်းဆီ ရွေးချယ်နည်း
👉 ခေါင်းလိမ်းဆီ အသုံးပြုပုံ Video များ
🇲🇲#mmgents နှင့်အတူ ပုံမှန်များထဲမှဖောက်ထွက်လိုက်ပါ။